Top 5 Ala tsara indrindra In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Ala tsara indrindra In Eoropa
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 12/03/2021)
Izahay nitanisa ny 5 Ala tsara tarehy indrindra any Eoropa ara-potoana fotsiny amin'ny Fetin'ny vanim-potoana fety! Ny hay-tsasatra tsain'ny ho an'ny ankamaroan'ny travel tia dia ny ny tora-pasika. Fa Eoropa manana fomba mihoatra noho ny dranomasina mba hijery. Hiaraka aminay rehefa maka stomp manodidina ny sasany amin'ireo ala tsara tarehy indrindra any Eoropa.
Adinoy ny Feno mafy tora-pasika sy ny zanany sy ny pestering hawkers. Indraindray tsy afaka mikapoka ny fiadanana sy ny filaminana ny tsara ala. Ny hoe eo amin'ny natiora no tena pahasalamana, dia aoka isika maka gambol maitso manodidina ny sasany Eoropa frondescent tena tsara indrindra.
Ny 1 On ny lisitry ny ankamaroan'ny Beautiful Ala In Eoropa – The Bavarian Forest, Alemaina
The Bavarian Forest National Park no valan-javaboary voalohany sy lehibe indrindra any Alemana, ary iray amin'ireo ala tsara tarehy indrindra any Eoropa. Nahoana no mety manontany? Mihevitra ny antso isika dia miankina amin'ny tsotra nefa be tany efitra. Noho ny lehilahy tsara nandao azy irery! Ny valan-javaboary Mampanantena mahatalanjona tontolo, malaza tampon'isa (ny tena maha-olona malaza Grosser Falkenstein, Lusen, ary ny Grosser Rachel), be tongotra lavitra ary bisikileta lalana, fitaratra farihy, fanatanjahan-tena fahafahana, ny mahavariana treetop mandeha, sy ny maro hafa.
Maniry ny hitondra ny fianakaviana amin'ny mahafinaritra sy ny tsy manam-paharoa traikefa nahafinaritra raha mitoetra ao amin'ny valan-javaboary? Ny treetop mandeha (Baumwipfelbad) ao amin'ny National Park Bavarian Forest Mampanantena akaiky fihaonana amin'ny natiora sy ny traikefa nahafinaritra ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Diabe tsy misy sakana vita amin'ny hazo mirefy 1,300 metatra mitarika ny mpitsidika ny fototr'ilay tilikambo fandinihana dome, fanatitra mahafinaritra fomba fijery ny ala eny an-dalana. Azonao atao koa ny misafidy ny handray anjara amin'ny fiaraha-mientana mahafinaritra teny an-dalana. Na izany aza, ny tsara indrindra dia voavonjy noho ny farany. Avy amin'ny birao fandinihana avo 44 metatra, mahazo ny fanasam ny masonao amin'ny uninterrupted fomba fijery ny ala, ary na dia ny oram-panala-mitafy Alpes.
Trillemarka Rollagsfjell Forest, Norvezy
Tongasoa eto amin'ny efitra anaty ala! Trillemarka Rollagsfjell Nature Arovy dia iray amin'ireo ala virjiny farany faritra ao amin'ny firenena. Izany no handeha-tongotra lavitra ny toerana ho an'ny fitomboana eo ala taloha, tia manao ski ambony amin'ny tendrombohitra mbola tsy, ary fanjonoana in tena tsara tarehy Rivers sy ny farihy. Misy be dia be ihany koa, 93 in tanteraka, ny karazam-biby Listed Red. Ho azo antoka ianao tongotra ho any amin'ny sarivongana hoe Madonna sy ny zaza, hita 100 metatra ivelan'ny zaridaina, fa mampino hevitra an-dohasaha, ary any an-dafin'i. Mitondra maro sosona, tahaka ny toetrandro miova tanteraka manerana ny faritra.
Ny National Park ny Belluno Dolomites mitohy avy amin'ny Cismon lohasaha mandra-Piave lohasaha, ary naorina tamin'ny 1990 mba hiarovana izany faritanin'i voajanahary goavana sanda, izay efa nahavita naoty nandritra ny taonjato maro noho ny hatsaran-manokana sy ny zavamaniry fahita firy. Noho izany, ny fanapahan-kevitra natao mba hiarovana ny 32000 hektara ny panorama voajanahary mahavariana avy any ririnina fanatanjahan-tena fampandrosoana.
Ny faritra ankehitriny harem-pirenena toerana ny hay tombanana-danja izay, marina, natiora fitsipika. Ny zavatra tianay momba ity valan-javaboary ity dia ny toerana tsy voakitika sy tsy azo idirana eo amin'ny sisin'ny Alpes atsimo atsinanana, izay amin'ny fotoana prehistoric nahita ny fananganana ny vongan-dranomandry (ny farany levona ny 10000 taona maro lasa izay!).
Fahasamihafana misy eo amin'ny Tre Cime von Lavaredo sy ny Belluno Dolomites, fantatra amin'ny hoe hatsatra tendrombohitra tokony hanaovan-tsoa ny loko ny rockface. Dia mamelombelon 'aina sy ny vertiginous Plateaux rockfaces: izao no haunts ny volamena voromahery, biby efa ho malaza noho ny fahasoavana, mendri-kaja sy mijoalajoala izy ireo amin'ny alàlan'ny lanitra sy ny fahita amin'ny karazany ao aminy.
Manantena izahay nomenay anareo ampy antony mitsidika Belluno Dolomites, ary nahoana isika no mihevitra fa iray amin'ireo ala tsara tarehy indrindra any Eoropa.
firavaka tranga, Frantsa
Ny mahatalanjona Parc National de Ecrins dia iray amin'ireo folo frantsay sy ny valan-javaboary lehibe indrindra faharoa taorian'ny Vanoise. The 1000 Ny INSEE dia km faritra arovana straddles ny Hautes Alpes sy Isère departemanta, mamelatra eo Bourg d'Oisans, Briancon, ary Embrun. Ny valan-javaboary mbola tsy simban'ny mitoetra indrindra noho ny toerana mitokana ary mazava ho azy, io dia ao amin'ny lisitry ny ala tsara indrindra any Eropa.
Ny faritry ny tendrombohitra miketrona ilay valan-javaboary dia faritana amin'ny alàlan'ny glaciers sy renirano mikoriana haingana, izay efa namorona hantsana lohasaha tery. In vanin-taona mafana, mpitsangantsangana, vatolampy mpianika, bisikileta an-tendrombohitra, ary mihazakazaka mankeny amin'ny valan-javaboary ny mpihazakazaka ny renirano hankafy ny toetr'andro mahafinaritra sy ny faritra mandondona valanoranony. In ririnina, snowshoeing, trano bongo ny fandriana mihantona Ski eran'i Boligaria sy ny Mountaineering no malaza. The Ski ala nenina ny Alpe d'Huez mipetraka fotsiny any an-dafin'ny faritry ny kianja. Inona no 10 km ny switchbacks avy Bourg d'Oisans.
Seranam-piaramanidina Lyon mankany Paris Lamasinina
Ny Last On ny lisitry ny ankamaroan'ny Beautiful Ala In Eoropa – Ny Ala Ao A Football Stadium, Pays-Bas
Ny tsy manam-pahataperana Tia Natiora dia fametrahana zavakanto vonjimaika izay manova ny Worthersee kianja filalaovam-baolina. Ny toerana ao amin'ny Klagenfurt, ary ankehitriny ny ala sy ny zavakanto fametrahana!
Around 300 hazo, ny sasany milanja hatramin'ny enina taonina isaky ny nafindra ho tsara noho ny efa misy baolina kitra dity. izany, manome ny fahatsapana fa ala eropeana afovoany. Raha vao nafindra, ny ala dia haka amin'ny fiainana ny azy, manova loko rehefa mihodina sy manintona ny vanim-potoana bibidia.
Mandehana mitsidika avy 10 aho mandra- 10 PM isan'andro (maimaim-poana teny)!
Moa ve ianao vonona ny manimbolo ny vaovao sy ny tany mando moss? Mba hanana ny fihetseham-po ny tara-masoandro shimmering ny alalan 'ny hazo sady namoaka flickering aloky ambonin'ny tany? Avy eo mitsambikina teo Save A Train sy ny Bokin'i ny Train Ticket na dia iray ihany ny ala tsara tarehy indrindra any Eoropa, ao anatin'ny minitra!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Top 5 Ala tsara indrindra In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-forests-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#ala #ala #forresttrip #fitsangantsanganana #toetra fialan-tsasatra